Ovao ny Monitor LXDE Battery amin'ny DEBIAN | Avy amin'ny Linux
Ovao ny Monitor LXDE Battery amin'ny DEBIAN
merlin ny debianite | | Fisehoana / personalization, fampiharana, GNU / Linux
Mihoatra ny fanovana no hatao Mametraha iray vaovao satria ilay tonga tsy mandeha amin'ny LXDE tsy azonao esorina ilay izy, esory fotsiny dia apetaho amin'ny takelakao. Amin'ny ahy dia hampiasa ilay rindranasa izahay fandriana mametraka izahay:
Rehefa vitanao ny mametraka azy io, amin'ny maha root antsika dia mandeha amin'ity adiresy ity izahay / sns / xdg / lxsession / LXDE ary sokafy ny rakitra autostart miaraka amin'ny mpampanonta lahatsoratra anay. (Raha tianao dia azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny nano na vim.)
Ary ampianay ny andalana farany @fdpowermon:
Ary rehefa vita isika dia hanana Fanaraha-maso bateria tsara tarehy. Izao fotsiny isika dia mila manomboka indray na mivoaka ary hanana zavatra toy izany ao amin'ny takelaka misy azy ireo ao amin'ilay faritra fampandrenesana izy ireo:
Aleo asehoko anao ny ahy Fitsapana i Debian amin'ny LXDE. Ho hitanao fa tsy manana ny bokotra Menu (na Trano) izy io fa mametraka takelaka misy ny Fampiharana Main rehetra.
Izany no natao androany. Omeo ny hevitrao hahitanao raha tianao ny lahatsoratro voalohany, koa azafady azafady. Tongasoa ireo tolo-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ovao ny Monitor LXDE Battery amin'ny DEBIAN
Lahatsoratra mahafinaritra. Tiako ireo tetika kely ireo. Aza mitsahatra mandefa zavatra ho an'ny LXDE.
LXDE Tianay ianao !!!!!!!!!!!!
Misaotra anao nanome hevitra.
Ankehitriny dia ao amin'ny E17 aho fa te hahalala ny fomba hametrahana fanaraha-maso fampiasana tamba-jotra amin'ny LXDE, satria ny roa izy ireo dia tsy niverina ary novonoiny rehefa ampiasaina izy ireo. Fa ny ilaiko dia zavatra toy ny grafika na bara izay manondro ny isan'ny kb / s amin'ny tamba-jotra no ampiasaina, ary raha toa ka tsara kokoa ny fampidirana sy ny fivoahana.
Raha misy mahay manao azy dia hankasitrahako izany.
Mety ho dingana iray hafa na kely kokoa noho ny amin'ny bateria fa raha ny marina dia tsy fantatro hoe misy mpanara-maso ny tamba-jotra izao dia avelao aho hanadihady ary hanome hevitra aho.
Yesid gilberto dia hoy izy:
Azonao atao amin'ny conky izany ary eo no amboarinao azy mba hampisehoana azy hatramin'ny voalohany
Valiny tamin'i Yesid Gilberto
Marina fa ho an'ny LXDE ihany ity form ity. Na dia tsaroako izao fa nanana zavatra nitovizany ny gnome.
Azonao atao ny mametraka ny mpanara-maso ny fifamoivoizana ao amin'ireo trano fitahirizana, saingy tsy misy mampiseho ny bara na ny sary afa-tsy ireo isa ihany.
Ok, ho hitako ny zavatra hitako amin'ny fanamarinana ireo trano fitahirizana.
Misaotra mamaly !!!
Lex Aleksandre dia hoy izy:
Fa inona no antony tsy tianao hampiasa ny monitor batterie misy anao?
Valiny tamin'i Lex Aleksandre
1. Ratsy be izany
2. Tsy manamarika ny fotoana ilaina hahatrarana sarany 0%
3. Indraindray io monitor default io dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary tokony hamerina ilay milina ianao.
4 ratsy tarehy be izy
5. Te hampiseho aminao ny Debianako amin'ny LXDE koa aho.
6. Voalazako ve fa tena ratsy tarehy io?
Mahatonga saina. Tsy nety nilaza ianao fa tena ratsy tarehy 😛
Hehehe .. eny, ny famantarana default dia mandeha amin'ny salan'isa na mahatsiravina xD! .. hehe: P!
Faaa ny hafa ho tsara, ianao hampianatra anay ny fametrahana an'io tontonana io amin'ny Lubuntu, misaotra!
Tsy dia sarotra izany, hazavaiko amin'ny lahatsoratra manaraka izany. Tsindrio fotsiny ny manampy ny takelaka vaovao, mametraka 200 teboka ny sakany, manampy ny bara fampiharana ianao ary manampy ireo rindranasa na programa tadiavinao. Raha tsy dia mazava loatra dia ampahafantaro ahy ary hataoko ny lahatsoratra.
vonona, mazava aho, misaotra betsaka
Tena ilaina, rehefa mampiasa fametrahana fototra LXDE na fizarana izay tsy mikasika ny lohahevitra sary ianao, dia hitanao foana ilay mari-pamantarana bateria mahatsiravina! ary tsy nahalala hazavana iray hisolo azy, misaotra nizara ny endrika.
Izy io koa dia miasa ao amin'ny Xfce Panel. Nanamarina.
Zavatra toy izany no notadiaviko ...
Ny lahatsoratra tsara dia nandrisika ahy hametraka debian ary toa tsy misy mpanara-maso bateria dia nametraka an'ity aho ary misaotra tonga lafatra
Tena tsara fantatro fa efa taloha ny lahatsoratra fa izaho kosa vaovao ao amin'ny Linux ary bebe kokoa amin'ity tontolon'ny birao ity, saingy io no miasa tsara indrindra amin'ny solosaina findainy raha misy zavatra tsara kokoa ankehitriny, ny sasany izay mety mampahafantatra ahy ity alalàn'ny fandrosoana ity bebe kokoa, misaotra betsaka ary tena tsara lahatsoratra
Desktop Linuxero tsara indrindra: Desambra 2012